Akụkọ - Nnọọ na Jinfuya ntecha Mma emere gị
Nabata na Jinfuya ntecha Mma ka emere gị
Jinfuya ntecha na-ji nganga tọrọ ntọala na-eto eto na City of Angels.
Ọ bụ akara ngosi mara mma ma na-agbanwe agbanwe nke nwere ike ịnye gị ihe ịchọ mma kachasị mma na anụmanụ.
Anyị na-eche banyere ịba uru na ịgụnye ya, ma gbaa obodo anyị mara mma chọrọ ka ọ makụọ ma gbalịa etemeete. Anyị anaghị eso usoro. Anyị setịpụrụ ha. Branddị anyị na-enye ohere na-akparaghị ókè ịmakụ ma mee ka ịpụ iche. Anyị nwere mmasị n’ịdị iche nke onye ọbụla, ma anyị n’onwe anyị na-ekpebi n’onwe anyị ihe ịma mma pụtara nye anyị na otu anyị si ebi ndụ.
Mma n'okpuru mmụọ anyị, ndị na-eme ihe etemeete na ndị hụrụ ejiji n'anya hụrụ ihe ịchọ mma Jinfuya n'anya maka ọtụtụ ihe.
Otu n'ime ha bụ na ngwaahịa nke anyị ntecha online ụlọ ahịa nwere ike inye gị na yi na magburu onwe ya elu-arụmọrụ ntecha.At Jinfuya anyị na-agbalị jikọọ na ndị ahịa anyị na chepụta anyị na ngwaahịa ya.
Anyị kwenyere na nkwupụta onwe onye ekwesịghị ịkwụ ụgwọ na-enweghị isi. Ahịa anyị dị ọnụ ala ma nwee ike ịnweta mmadụ niile. Jinfuya bụ ụlọ ọrụ maka ndị niile mara mma na-achọ ịbịakọta ọnụ wee nweta ike na anwansi nke etemeete. Sonyere anyi Buru akuku nke obodo anyi. Kwe ka onwe gi kpalie ma kpalite ume ka i rio nrọ ma bie ndu.
Ahịa anyị na-enye ohere na-adịghị agwụ agwụ iji kwado ọdịiche anyị. Anyị kwenyere na onye ọ bụla dị iche na ọ bụ ezie na anyị na-ekerịta ahụmịhe anyị na-ahụkarị na anyị niile na-achịkwa akara aka anyị. Anyị anaghị eso usoro a. Anyị kere ya.
Ebumnuche anyị bụ ime ka ụmụ nwanyị nwere agba gburugburu ụwa bụrụ ndị mara mma karịa. Jinfuya Ngosiputa Ngwa bu ima nma nke nnabata onwe ya na ike nke umu nwanyi nke oge a nwere akuko nke ngwongwo di oke onu ahia, nke nwere onu ogugu iji mezuo, meziwanye ma mezie ya.